Nahoana No Any Am-ponja i Sonia Garro, ilay Kiobàna Mpanohitra ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2013 17:00 GMT
Nogadraina tany Kiobà efa ho iray taona mahery i Sonia Garro. Mpikambana iray ao amin'ny mpanohitra any Damas de Blanco, vondrom-behivavy iray mpandroso soso-kevitra ho fanafahana ireo gadra politika any Kiobà, voasambotra nandritra ilay bemidina nahery vaika nataon'ny polisy tao an-tranon'izy ireo tamin'ny lohataona 2012 i Garro sy ny vadiny. Nogadraina nandritra ny volana maro izy talohan'ny nivoahan'ny tena fitoriana azy. Tamin'ny voalohany, voampanga ho “mpampihorohoro”, izao izy notoriana ho nanao herisetra, nahatonga fikorontanan'ny filaminam-bahoaka sy ilay fanandramana ny hamono ny iray tamin'ireo polisy manam-boninahitra voarohirohy tamin'ilay bemidina.
Sonia Garro Alfonso avy any Tracey Eaton tao amin'ny Vimeo.
Tamin'ny taona 2012, nanadihady an'i Garro ny mpanao gazety Amerikanina sady mpisolovava Tracey Eaton .
Misoko mangina ilay fotokevitra, saingy zara raha misy ny vaovao.
Sarotra hadihadiana amin'ny alalan'ny fanarahana ny media any amin'ny sisin'ny elo-dranon'ny Florida ireo tranga toy ny an'i Garro. Nampiseho tsikera henjana momba ny governemanta ho toy ny “mpikarama an'ady” tohanan'ny governemanta Amerikanina ara-bola ny fanjakana Kiobàna, raha toa kosa ny famoaham-baovao Amerikana manolotra tsy tapaka ireo tsaho hoe ireo Kiobiàna rehetra dia efa voasasan'ny governemantan'ny Castro ny atidohany hanaiky be fahatany na hanao antso avo hitakiana endri-pahafahana ratsy famaritana. Tsy nisy tena naharesy lahatra avokoa izy ireo.
Sarotra ny mahita fanazavana mikasika ny antony nitànana am-ponja an'i Garro sy ny antony nanosika ilay fisamborana tany an-tranony. Tsy niloa-bava momba ny raharaha Garro ny lehiben'ny mpamokatra ny vaovaom-panjakana Kiobàna Granma sy Cubadebate. Ireo tambajotran'ny mpanohitra sy ny vaovaom-bahiny no nitatitra fa anisan'ireo olona navitrika niady tamin'ny governemanta izy hatramin'ny taona 2009 — ny asa nataony dia nanomboka tamin'ny fananganana foibem-pikambanana iray mahaleo tena, ka hatramin'ny nanatevenany laharana ny Damas de Blanco, vondrona iray fantatra fa tohanan'ny governemanta Amerikanina ara-bola. Tsy ara-dalàna ny fandraisan'ireo olom-pirenena ao Kiobà fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta Amerikàna — na dia azo iadian-kevitra aza ny maha-ara-drariny an'izany araka ny fenitra iraisampirenena momba ny Zon’ olombelona, afaka ampiasaina io hanamarinana ny fisamborana azy eo ambanin'ny lalàn'ny Kiobàna. Saingy Garro dia anisan'ireo vehivavy maro nandray anjara tamin'io ezaka io — mety ny fisian-trangan-javatra manokana nikasika ny andraikin'i Garro no nitarika ny fanaovana bemidina tany an-tranony.
Indrisy anefa, tsy dia nisy ny mangarahara tamin'ny fampiharana ny lalàna sy ny dingam-pitsarana tany Kiobà, noho izany dia tsy misy ananan'ny vahoaka fahefana ny hahalàla ireo sy didy fampisamborana, ireo fanamelohana, ary ireo antontan-taratasy hafa. Amin'ny lafiny iray, ny fotoana elabe nitazonana tsy nisy vesatra nanjo an'i Garro dia manambara fa mety tsy misy fanamarinana matanjaka araka ny lalàna ny famonjàna azy. Noho ny tsy fisiana vaovao mismisy kokoa, tahàka ny hoe noho ny hetsika ara-politika nataony no nampigadra an'i Sonia Garro.
Nihoatra ny tsipika ve izy?
Ao anatin'ny lahatsoratra iray ho an'i Diario de Cuba iray, nanoratra i Ivan Garcia hoe,
Na dia tsy misy mahalala aza ny porofo ara-tsiansa ts azo ihodivirana hahafantarana ilay tsipika manify manasaraka ny azo atao manoloana ny ataon'ny governemanta hoe heloka. Tsy mahalala izany koa i Sonia, kanefa resy lahatra izy fa andrana ho fampiasàna ny zony izay rehetra nataony.
Amin'ny famadihana ho takatry ny daholobe ny kabary politika any Kiobà, matetika ireo mpanoratra no maka marika amin'io “tsipika” marihan'i Garcia io . Mety ho petrak'olana ho anà tranga maro io fanamboarana io, kanefa rehefa tonga amin'ny fanampiana ara-bola ny resaka, mazava toy ny andro miposaka ny toeran'ilay tsipika faheno foana.
Rehefa mandingana io tsipika io ny olona iray, lasa “gusano” na mpamadika, voarohirohy ho manana fitondran-tena tsy mendrika. Mety ho very asa ireo izay miampita io tsipika io, tapaka fifandraisana amin'ireo fianakaviana sy namana, fanaovana antsojaty avy amin'ireo mpiandany amin'ny governemanta, ary indraindray fanenjehana araka ny lalàna. Nandray anjara noho ny finoana ara-politikan'izy ireo ve ny Damas, sa ve noho ny vola azo indrindra indrindra? Sa nazoto noho ny fiarahan'izy roa izy ireo? Sarotra fantarina izany.
Miala amin'ireo fandrika ara-politika momba io resabe io ny Kiobàna maro amin'ny alalan'ny fanisahana ireo tsikeran'izy ireo ho any amin'ny sehatry ny politika sy fameperana, fa tsy any amin'ny foto-kevitra/ideolojia. Ny sasany anefa, indrindra ireo niova mandrakizay ny fiainany vokatr'ireo sazy henjana noho ny hetsika ara-politika sy ireo heloka madinika tahaka izany, dia mazàna be fahasahiana kokoa hiatrika ireo vokatry ny fanaovana zavatra midadasika, fitondràna tsikera momba ny rafitra manontolo, sy fanekena ny fanampiana avy any ivelany izay mamela azy ireo hitazona ny fari-piainany, na dia mety ho làlana hitondra amin'ny fanaovan'ny fiarahamonina azy ireo ho eny anjorom-bàla aza izany. Nanana fahasahiana lehibe i Sonia Garoo tamin'ny fidirana tanaty hetsika manohitra ny governemanta sy fanatevenanana ny laharan'ny fikambanana Damas. Ary amin'izao dia mizaka ny vokatr'izany izy.